Mety mahasoa anao: Rehefa manao zavatra dia atombohy amin'ny mora hatrany
mercredi, 22 juillet 2020 14:33
Matetika isika misy asa marobe tsy maintsy atao. Diniho iza no mifampiankina, iza no tsy maintsy atao mialoha vao manao ny asa hafa.
Zarazarao ho asa madinidinika izay asa lehibe tsy maintsy atao, ary atombohy amin'ny asa mora atao sy hainao avy hatrany, mba hanome herijika na courage anao manoloana ny asa maro miandry. Ho hitanao ny fandrosoan'ny asa ka tsy ho kivy ianao.
Rehefa milamina ireo asa madinidinika tsy maintsy atao, dia matoria mihitsy aloha, vao maraina mbola tsy nanao zavatra hafa, dia hidiro ilay asa vaventy. Rehefa tsapanao fa tsy mety hatrany ilay izy, dia ajanony kely mihitsy aloha, aleo hiandry ny ampitso indray, ho hitanao fa rehefa mifoha ianao dia mitombona tokoa ny hoe "ny alina mitondra fisainana", satria na matory aza ianao, io sainao io mandinika ilay olana hatrany, ka ho hitanao ho azy eo ny vahaolana.
Aza matahotra ny mianatra, maka hevitra, mijery internet ny zavatra tsy hay na mampisalasala. Ny fiainana dia fianarana, ny bado ihany no mihevi-tena fa tapitrohatra fanaperana amin'ny fahaizana. Ny tsy feno no mikobana.
Azo ampiharina amin'ny fanadinana izany ho an'ny mpianatra. Vakio tsara manomboka hatrany amboalohany ny laza adina na sujet. Aza manoratra mihitsy aloha. Hivereno vakiana fanindroany raha ilaina.
Atomboy amin'ny exercice tsotra raha mathématiques na physiques. Raha 3 ny exercice, ka 4 points avy, dia raha vitanao tsara izy 3 dia efa assuré ny 12/20, vitainao milamina ny grand problème 8 points, ka na ny antsasany aza no vitanao, dia efa 4 points hafa izay, ka ahazo 16/20 ianao. Raha vita hatramin'ny farany tsy misy diso, vao maika tsara.
Rehefa misy olana goavana, dia hivereno fa ilay hevitrao voalohany iny matetika no marina.
Raha fintinina dia io hevitra io no nampiharin'i Ford niainga tamin'ny tsanga-kevitry Taylor namorona ny travail à la chaîne nanamboarana ny fiarakodia any amin'ny ozinina.
Nozarazaraina faran'izay kely indrindra ny asa (tâche), ka dia samy spécialiste amin'ilay asa keliny ny tsirairay. Mety mpanery bolao seza fotsiny no asany, fa vitany tsara iny, ka ny ozinina mpanamboatra fiara iray dia mahatafavoaka fiara iray isaky ny 2 minitra.
Mety heverina fa asa tsy manaja ny maha olona izay fanaovana asa mitovy izay hatrany, fa lanjalanjaina ny asa atolotra, sy ny karama tokony ho tsara omena ny mpiasa, raha ny hevitry Taylor, hanome fikirizana ilay mpiasa.
Misy ihany koa fanovana sy fampihofanana amin'ny asa na tâche hafa mba ampisy polyvalence na fahaizana zavatra maromaro, anoloana ny mpiasa mety tsy ampy tampoka, no tsy hanimba ny fahasalamana, satria miova toerana sy fihetsika atao, travail répétitif mety mankarary vanin-taolana na hozatra, izay mitarika fijanonana ara-pahasalamana an'ilay mpiasa, arrêt maladie, nefa ny orinasa ihany no andoa ny karamany mandritra izy tsy miasa, sy ny fitsaboana azy..